Iinqwelomoya zeCondor Airlines ziqala kwakhona ukubhabha kwiiParadesi zeSeychelles
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Iinqwelomoya zeCondor Airlines ziqala kwakhona ukubhabha kwiiParadesi zeSeychelles
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Iinqwelo moya zeCondor zibuyela eSeychelles
Inqwelomoya yenqwelomoya iBoeing 767/300 yenqwelo moya yakwaCondor yachukumisa kwisikhululo senqwelomoya saseSeychelles ngo-0620 kusasa ngoMgqibelo, nge-2 Okthobha ka-2021, apho ukubuyela kwayo kwiziqithi zeparadesi kwamkelwa ngomlomo.
Uhambo lokuqala lukaCondor lweli xesha oluya kwiziqithi zaseSeychelles lwakhwelisa abakhweli abali-164.
Abagibeli ngamnye wamkelwe njengenxalenye yoludumo olufudumeleyo besamkela isikhumbuzo esivela kwiSebe lezoKhenketho kwaye bonwatyiswa ngomculo wesintu odlalwa ngoku.
Imakethi yaseJamani yenye yezona ntengiso zisezantsi zeSeychelles.
Ukuqala kwakhona kweenqwelomoya ezingamisiyo ukusuka eFrankfurt, uhambo lokuqala lukaCondor lonyaka ukuya Seytshels bathwele abakhweli abali-164 abafumene njengenxalenye yesincoko esishushu samkela isikhumbuzo esivela kwiSebe lezoKhenketho kwaye bonwatyiswa ngomculo wesintu odlalwa ngoku.
Okwangoku ngokufika kwenqwelomoya kunye nokubulisa abakhweli abali-164 xa behlayo, uMlawuli Jikelele weSebe lezoKhenketho kwiNtengiso yeNdawo, uNkosk.Bernadette Willemin, uthe ngokuqala kwakhona kweenkonzo zayo, uCondor ujoyina ezinye iinqwelo moya ezifaka isandla kwi ukuvuselelwa kweshishini lokhenketho kunye noqoqosho lweziqithi.
“Ngokuqala kwakhona kweenkonzo zayo, uCondor ujoyina ezinye iinqwelomoya ezili-12. Ngokuqinisekileyo kusinika ulonwabo olukhulu ukubona elinye iqabane leenqwelo moya libuyele kunxweme lwethu. Ukubhabha ngokuthe ngqo kwisixeko saseYurophu kuhlala kunexabiso elongeziweyo lendawo oya kuyo. Oku yi inyathelo elikhulu ekubuyiseni kwethu ngakumbi njengoko intengiso yaseJamani yenye yezona ntengiso zisezantsi zeSeychelles. Ukuqalisa kwakhona kweenqwelo-moya kuza ngexesha elililo kwaye urhulumente waseJamani unciphisa iimfuno zokuhamba kubemi baseJamani kunye nabahlali abahamba eSeychelles, ”utshilo uNkosikazi Willemin.
Umnumzana Ralf Teckentrup, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba seCondor, evakalisa ukuzithemba kwakhe kwindawo esiya kuyo, uthe, “I-Seychelles kuLwandlekazi lwase-Indiya yeyeshedyuli yeenqwelomoya zeCondor kwaye yindawo ethandwayo ngabakhenkethi bethu. I-archipelago iyonwabile ngeelwandle ezizodwa, iingqaqa zekorale kunye namahlathi emvula kwaye sijonge phambili ekubhabhiseni iindwendwe zethu ngeholide emva kwexesha elide lokuhambahamba. Sisebenze ngempumelelo enkulu neSeychelles yezoKhenketho ixesha elide ukwenza iindwendwe zethu ukuba zikonwabele ukuphumla kwazo. ”
I-Seychelles yoKhenketho izakusebenza nenqwelomoya, amaqabane eshishini lokhenketho, amajelo eendaba kunye nokunyusa umkhankaso wabathengi wokubuyisa iindwendwe kwiimarike zayo eziphambili. “Iinzame zethu ngoku zigxile ekubuyiseni iindwendwe zethu ezivela eJamani nakwamanye amazwe angabamelwane. Ukufika kweCondor, silindele ngolangazelelo ukonyuka kwenani lokufika kweendwendwe, ”utshilo uNkskz. Willemin.
IJamani yayiyeyona ndawo iphambili yentengiso eSeychelles kwi-2019, xa indawo ekuyo yarekhoda abatyeleli abangama-72,509 abavela eJamani, phantse ikota yabo behamba ngeCondor. I-8,080 yeendwendwe zityelele iSeychelles kwiinyanga ezilithoba zokuqala zika-2021.